Newton Mail waa la cusbooneysiiyay waxayna keeneysaa horumar ka badan intii loo baahnaa | Wararka IPhone
Newton Mail waa la cusbooneysiiyay waxayna keeneysaa wax ka badan hagaajinta lagama maarmaanka ah
Marar badan ayaan halkan kuugu keenay faallooyinka aan caadiga ahayn ama dhajinta ku saabsan codsiyada ugu fiican ee maareynta emaylka. Maalinteeda, Cloud Magic waxay la timid fikrado qiiro leh oo dhamaaday inta badan inteena badan. Si tartiib tartiib ah, Cloud Magic wuxuu u kordhay inuu noqdo waxa hadda loo yaqaan 'Newton Mail', oo ah codsi maareyn emayl ah oo dhammaystiran sidii kii hore, ama xitaa ka sii badan, iyada oo kaliya hoos u dhaca ay tahay codsi ku shaqeeya rukumo. Illaa iyo hadda waxaan si dhow ula soconaynaa horumarkiisa iyo waxqabadkiisa, sidaa darteedna Waxaan kuu soo qaadaneynaa warka ay Newton Mail noo soo bandhigeyso cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay.
Sidaad horeba u ogayd, Newton Mail waa codsi iskutallaab ah, laga bilaabo PC ilaa macOS, iyo laga bilaabo Android ilaa iOS, iyada oo loo marayo goobo badan oo badan. Si kastaba ha noqotee, ma seegin munaasabadda inaan dhahno waxay heleysaa dhaleeceyn badan oo ku jirta IOS App Store oo ku saabsan waxqabadka cusbooneysiinta ugu dambeysay. Taasi waa sababta ay u dhigeen baytariyada oo ay noo soo bandhigaan wararkan:
Imaanayaa maaraynta faylkii ugu dambeeyay ee Newton, waxay ahayd muuqaal maqan, oo aan awood u lahayn inay abuurto ama ka rarto fayl bixiyaha emaylka aannu jecel nahay.
Adiga oo gujinaya sawirka qoraaga emailka waan arki karnaa dhammaan macluumaadka ku saabsan arrintan oo ka imanaya degelkeeda ama bixiyeyaasha kale.
Gaariga BBC: Waxaan hadda ku dari karnaa qof qaata otomatiga dhammaan e-mailkayaga ku jira menu-yada.
Hadda waxaan u adeegsan karnaa dhawaaqyo kala duwan ogeysiisyada emayl kasta, iyo sidoo kale emayllada la akhriyo ama dib loo dhigo gadaal.
Waxaas oo dhan waxaa u dheer, Newton Mail inay u maleyneyso inay xallisay qaladaad fara badan oo jiiday xagga ogeysiisyada iyo buufinnada dalabka. Waad heli kartaa, laakiin xusuusnow in Newton ay leedahay rukumo sannadle ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Newton Mail waa la cusbooneysiiyay waxayna keeneysaa wax ka badan hagaajinta lagama maarmaanka ah
Ku jawaab Imaguari
JPMorgan Ayaa Yiri iPhone 8 Ayaa Lagu Soo Bandhigi Doonaa Bisha Juun WWDC
Kuwani waa labaatanka hay'adaha amaahda cusub ee ku yimaada Apple Pay